चीनले कृत्रिम चन्द्रमा बनाउँदै, अब सडकबत्ती नचाहिने !! - Experience Best News from Nepal
चीनले कृत्रिम चन्द्रमा बनाउँदै, अब सडकबत्ती नचाहिने !!
चीनले कृत्रिम चन्द्रमा बनाएर विज्ञानको क्षेत्रमा चमत्कार गर्ने घोषणा गरेको छ । चीनले सन् २०२२ सम्म यस्ता ३ वटा कृत्रिम चन्द्रमा स्थापित गर्ने घोषणा गरेको हो । यस्ता चन्द्रमा शिशाबाट बनाइने र यिनीहरूले सूर्यको प्रकाशलाई परावर्तित गरेर राति प्रकाश दिने छन् ।
धेरैले भने यस्तो प्रकारको कामले जनावरहरुमा नकारात्मक असर पर्ने बताएका छन् । तर यस प्रकारको प्रयास पहिलो भने होइन । यस अघि रुसले समेत यस्स्तो प्रयास गरिसकेको छ ।